လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၇) နှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ "ကတ္တီပါလမ်းခွဲ" သီချင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် - Cele Connections
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၇) နှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “ကတ္တီပါလမ်းခွဲ” သီချင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က အနုပညာသက်တမ်း နှစ်(၂၀) ကျော်မှာ အောင်မြင်မှု အရှိန်အဝါ လုံးဝကျဆင်းမသွားတဲ့ ရှားရှားပါးပါး အဆိုတော်တစ်ဦးပါ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ သီချင်းတိုင်းဟာ လူကြိုက်များ အောင်မြင်လှသလို စိုင်းစိုင်း ရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတိုင်းကလည်း နာမည်ကြီးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း အခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင် ပရိသတ်တွေကြားမှာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရယ်လို့ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ လွှမ်းမိုးမှုရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ်အသစ်အတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က ပရိသတ်တွေလက်ထဲ ထည့်မပေးနိုင်သေးခင်မှာ သူ့ရဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၇) နှစ်က သူ့ရဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “ကတ္တီပါလမ်းခွဲ” သီချင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို “Remember This? ဒီသီချင်းနဲ့အမှတ်တရ တစ်ခုခုများရှိခဲ့ရင်” ဆိုပြီး အမှတ်တရဟောင်းတွေကို ပြန်လည်ပြောပြဖို့ မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။
“ကတ္တီပါလမ်းခွဲ” သီချင်းလေးကတော့ (၂၀၀၃) ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ “ဖောဖော်ဝါရီမှတ်တမ်း” အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်အများဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော “ကတ္တီပါလမ်းခွဲ” သီချင်းလေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အမှတ်တရတွေရှိရင် ပြောပြပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လှနျခဲ့တဲ့ (၁၇) နှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ “ကတ်တီပါလမျးခှဲ” သီခငျြးနဲ့ ပကျသတျပွီး ပရိသတျတှကေို မေးခှနျးထုတျလာခဲ့တဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အအောငျမွငျဆုံး အနုပညာရှငျ တဈဦးဖွဈတဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျက အနုပညာသကျတမျး နှဈ(၂၀) ကြျောမှာ အောငျမွငျမှု အရှိနျအဝါ လုံးဝကဆြငျးမသှားတဲ့ ရှားရှားပါးပါး အဆိုတျောတဈဦးပါ။ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျရဲ့ သီခငျြးတိုငျးဟာ လူကွိုကျမြား အောငျမွငျလှသလို စိုငျးစိုငျး ရိုကျကူးတဲ့ ရုပျရှငျဗီဒီယိုတိုငျးကလညျး နာမညျကွီးတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး အခုလကျရှိအခြိနျထိတိုငျ ပရိသတျတှကွေားမှာ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျရယျလို့ နာမညျတဈလုံးနဲ့ လှမျးမိုးမှုရှိနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ သီခငျြးအယျလျဘမျအသဈအတှကျ ပွငျဆငျနတေဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျက ပရိသတျတှလေကျထဲ ထညျ့မပေးနိုငျသေးခငျမှာ သူ့ရဲ့ သီခငျြးဟောငျးလေးတှကေို ပွနျလညျ မြှဝပေေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျက လှနျခဲ့တဲ့ (၁၇) နှဈက သူ့ရဲ့ သီခငျြးဟောငျးလေးတဈပုဒျဖွဈတဲ့ “ကတ်တီပါလမျးခှဲ” သီခငျြးနဲ့ ပကျသတျပွီး ပရိသတျတှကေို “Remember This? ဒီသီခငျြးနဲ့အမှတျတရ တဈခုခုမြားရှိခဲ့ရငျ” ဆိုပွီး အမှတျတရဟောငျးတှကေို ပွနျလညျပွောပွဖို့ မေးခှနျးထုတျလာခဲ့ပါတယျ။
“ကတ်တီပါလမျးခှဲ” သီခငျြးလေးကတော့ (၂၀၀၃) ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ စိုငျးစိုငျးရဲ့ “ဖောဖျောဝါရီမှတျတမျး” အယျလျဘမျထဲမှာ ပါဝငျခဲ့တာဖွဈပွီး လူကွိုကျအမြားဆုံး သီခငျြးတဈပုဒျ ဖွဈခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော “ကတ်တီပါလမျးခှဲ” သီခငျြးလေးနဲ့ ပကျသတျပွီး အမှတျတရတှရှေိရငျ ပွောပွပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ဖေဖေ့ကို အိမ်မြန်မြန်ပြန်လာဖို့ ချစ်စဖွယ်စကားလေးတွေဆိုပြီး အချွဲပိုနေကြတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းတို့ သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဒီယို
(၁၃) နှစ်ငယ်တဲ့ ချစ်သူမောင်လေးနဲ့ လမ်းခွဲပြတ်ဆဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောလာတဲ့ ပိုပို
ပရိသတ်တွေကို စနောက်ပြီးမေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာ တကယ်ကြီးထင်ပြီး ကောမန့်လာပေးတဲ့ ချစ်သုဝေကြောင့် သဘောကျစွာနဲ့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့ မိစန္ဒီ